IXiaomi Mi 9T Pro ifumana isatifikethi seBluetooth SIG kwaye kungekudala iza kufika eYurophu | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9T Pro ngoku ikulungele ukufika eYurophu: ifumene isatifikethi seBluetooth
Phantse iiveki ezimbini ezidlulileyo Xiaomi Mi 9T yeza eYurophu, emva kokuba yaqaliswa okokuqala e-China njenge Redmi K20. Isixhobo sifike kule marike ngaphandle komntakwabo omdala, oya kugcina igama elifanayo lommandla, kodwa ngokongeza "Pro" ekugqibeleni, njengoko kulindelwe.
I-Bluetooth SIG, umbutho ophetheyo wokubonelela ngezatifikethi zeBluetooth kwizixhobo ezilandelayo eziza kumiliselwa ubhalise kwaye wavuma iXiaomi Mi 9T Pro. Ke ngoko, izokwazisa kungekudala kummandla waseYurophu nakwezinye iimarike apho ingekanikezelwa.
Eli qumrhu likhankanywe ngasentla, njengoko besitshilo, liyinikile isatifikethi kwiflegi entsha yomenzi waseTshayina. Oku, ukongeza ekuqinisekiseni ukufika kwayo ekudala kulindelwe eYurophu, ikhankanya ezinye zeempawu zayo ezaziwayo, ezinje ngokudityaniswa kwe-BT 5.0 kunye nenkqubo yokusebenza. Android Pie ebalekayo, engazukuvela ngaphandle MIUI 10 ngasentla, ngokucacileyo. Olu luhlu lunomhla wobhaliso we-18 kule nyanga kwaye luchaza i-terminal phantsi kwegama lekhowudi "M1903F11G".
Xiaomi Mi 9T Pro kwiBluetooth SIG
Zeziphi iinkcukacha ezinazo? Ewe, iyafana nale sele isungulwe iRedmi K20 Pro.Ungalindeli ngaphezulu okanye ngaphantsi, kodwa ngokufanayo. Ekuphela kwento etshintshayo ligama ekuza kuthengiswa phantsi kwalo ngaphandle kwe China ne India, enye intengiso engekafiki kuyo, kodwa eyakwenza njalo kwinyanga ezayo.
I-Mi 9T iza kuza ne Isikrini se-6.39-intshi ye-AMOLED kunye nesisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2,340 x 1,080, iprosesa Snapdragon 855, 6/8 GB ye-RAM kunye ne-64/128/256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Ukongeza, ixhobisa i-48 MP + 13 MP + 8 MP yemodyuli engasemva yokufota kunye ne-sensor yangaphambili ye-selfies nangaphezulu kwe-20 megapixels yesisombululo.
Ikwaxhotyiswe ngesifundi esidityanisiweyo seminwe phantsi kwescreen, i-NFC, ukubonwa kobuso, i-3.5 mm audio jack kunye ne I-4,000 mAh ibhetri yamandla ene-27 watt inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi 9T Pro ngoku ikulungele ukufika eYurophu: ifumene isatifikethi seBluetooth
Uyiqala njani imowudi ekhuselekileyo kwifowuni yeHuawei
I-Kirin 810 igqitha kwi-Snapdragon 855, Kirin 980 kunye nezinye iichipset kwi-AI enkosi kwi-NPU yayo yoburhalarhume.